Eprel 21 bụ Mobilegedden nke Google! Ndepụta gị maka Mobile SEO | Martech Zone
Eprel 21 bụ Mobilegedden nke Google! Ndepụta gị maka Mobile SEO
Monday, April 13, 2015 Sunday, Eprel 12, 2015 Douglas Karr
Wejọ dịkwa anyị? Ee e, ọ bụghị n'ezie. A na m atụ ụjọ na saịtị ndị ejibeghị nke ọma maka ojiji ekwenti na-ata ahụhụ site na mmekọrịta na mmekọrịta nke ndị ọrụ na-adịghị mma. Ugbu a Google na - ejide ngwa ngwa site na imelite algorithms iji kwụọ ụgwọ saịtị ndị kachasị maka onye ọrụ mkpanaka nwere ọkwa dị ukwuu na nyocha ekwentị.
Bido na Eprel 21, anyi ga-agbasawanye ojiji nke ekwenti-enyi na enyi dika akara ogo. Mgbanwe a ga-emetụta ọchịchọ mkpanaka na asụsụ niile zuru ụwa ọnụ ma nwee mmetụta dị ukwuu na nsonaazụ ọchụchọ anyị. N'ihi ya, ndị ọrụ ga-adị mfe ịnweta ihe dị mma, nsonaazụ ọchụchọ dị elu nke kachasị maka ngwaọrụ ha. Njikwa Nchọta Google
Nke a na-eme ka uche zuru ezu ma ọ bụrụ na ị jụọ m… ọ bụghị n'ezie na nro onye ọ bụla na-eti mkpu na ụlọ ọrụ SEO. Echere m na ọtụtụ n'ime ume na-egosi isi nsogbu na ụlọ ọrụ ọchụchọ - nlebara anya nke ukwuu n'ọkwá na enweghị nlebara anya zuru ezu na njikọ ndị ọrụ na mgbanwe. Ndị ndụmọdụ SEO ga-edozi saịtị ndị ahịa ha ogologo oge gara aga ma ọ bụrụ na ha na-elekwasị anya na usoro ziri ezi.
Anyị na-akwado itinye n'ọrụ Nnwale Enyi na Enyi nke Google na Webmaster si Mobile Usability Report iji dozie nsogbu ma dozie nsogbu ọ bụla pụtara na saịtị gị. Nke a bụ ihe infographic zuru oke site na Itoolu hertz, Ntinye, na AntiPull.
Tags: April 21ike na-eje ozigoogle mobile seogoogle seomkpanaka ọchụchọmkpanaka seosaịtị mkpanakanlele mkpanakawebụsaịtị mkpanakaagbagona-anabata saịtịiche iche URLnlele
Douglas Karr Monday, April 13, 2015 Sunday, April 12, 2015
Ndụmọdụ 5 iji Were Broshọ Azụmaahịa Gị
Ndụmọdụ 14 maka imeziwanye Ọrụ Nchọgharị Organic na Google
Apr 13, 2015 na 10: 11 AM
Nke a bu ihe ozo n’udi uzo di uku iji mee ka ndi isi m kwenye na anyi kwesiri imelite. O siri ike igosipụta mgbanwe mgbe a hụrụ ihe niile bụ akara dollar nke ego mbụ…
Apr 13, 2015 na 7: 35 PM
Echere m na ọ bụ ma ihe nzuzu ma ntakịrị ihu abụọ maka Google ịkwanye nke a mgbe ọrụ Google n'onwe ha so na ndị kacha njọ.
Ọmụmaatụ ihe dịka mkpụrụedemede Google yana nchịkọta ama ama nke ọma na-akpata igbochi (nsụgharị) na nsogbu ọsọ.
Ọ bụ ezie na ejiri m obi m niile kwenye na anyị niile kwesịrị ịnwe mmekọrịta enyi na enyi, anyị chọrọ ngwaọrụ ka mma karịa ọrụ Google abụọ ị tụrụ aro.
Google's Mobile Usability tester na-enye nsonaazụ dị iche dabere n'oge oge ọ bụ. Mgbe ụfọdụ ị na-awesomely mobile enyi na enyi na ndị ọzọ oge gị,
Na Google's Webmaster Tools maara nke ọma maka ịbụ onye na-enweghị nchekasị mgbe niile yana nsonaazụ ya.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhụ peeji nke ọ weere na mkpanaka adịghị mma karịa otu ọnwa gara aga, ọ nweghị ụzọ iji melite ya ma mee ka ọ mata mgbe ị doziri nsogbu ahụ.
Gụnyere m etinye ahaziri ahazi data na saịtị m ọtụtụ afọ gara aga ma m ka na-eche WMT ka ịdekọ ya kpamkpam.
Yabụ ị ga-eche, ọ bụrụ na Google ga-amalite ịtinye saịtị, ọ ga-adabere na data ochie ma ọ bụ data dị ugbu a?
Google ọ ga - enye onye ọ bụla ohere ziri ezi iji mee ka ọ mata mgbe edozi nsogbu ndị ahụ?
N'oge ahụ nke ahụ yiri ka ọ gaghị adị.
Apr 13, 2015 na 11: 10 PM
Mark, anaghị m ekwenye ma ọlị. Agbanyeghị, Google Webmasters arụgoro ezigbo ọrụ na iwulite ngwa ọrụ zuru ezu iji nwalee saịtị gị. Jide n'aka na ị debanyere aha maka Webmasters, tinye saịtị gị, wee hụ nsonaazụ ya. Ha na-enyere gị aka dozie nsogbu ọ bụla ruo na pikselụ.